အချိန်မတိုင်ခင် နေ၀င်ရတော့မယ့် အင်္ဂလန်တို့ရဲ့ ကြယ်ပွင့်ဟောင်း မီကာရစ်ချတ်
အချိန်မတိုင်ခင် နေ၀င်ရတော့မယ့် အင်္ဂလန်တို့ရဲ့ ကြယ်ပွင့်ဟောင်း Micah Richards
14 Aug 2018 . 3:19 PM
မီကာရစ်ချတ် Micah Richards ဆိုတဲ့ အမည်ကို ပရိသတ်တွေ မှတ်မိသေးရဲ့လား။ တစ်ချိန်တုန်းက အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ အနာဂတ် အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ့်သူလို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသူ၊ မန်စီးတီးအသင်း တစ်ခေတ်ဆန်းချိန်မှာ ပါဝင်ခြေစွမ်းပြခဲ့သူ။ အဲဒီလို ကစားသမားက အခုအချိန်မှာတော့ အရွယ်မတိုင်ခင် နေ၀င်ရတော့မယ့် အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေပြီ။ အင်္ဂလန် ဆယ်ကျော်သက်ကစားသမားထဲမှာ ထွန်းတောက်လာမယ့် ကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မီကာရစ်ချတ်အတွက် အဓိက ထိုးနှက်ခဲ့တာက ဒဏ်ရာပြဿနာတွေပါပဲ။
လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ် အက်စတွန်ဗီလာအသင်းမှာ အသက်ဆက်နေတဲ့ မီကာရစ်ချတ်ဟာ အခုဆိုရင် သူ့ Career က အတက်မရှိတော့ဘဲ နောက်ထပ် ဆက်ကျဖို့သာရှိတော့တယ်။ အခုဆိုရင် မီကာရစ်ချတ်ဟာ ဘောလုံးကွင်းကို ခြေမချဖြစ်တာက (၆၆၅)ရက်အထိ ရှိနေပြီ။ တိတိကျကျပြောရရင် ၂၀၁၆၊ အောက်တိုဘာ (၁၅)ရက်တုန်းက ၀ုလ်ဗ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲနောက်ပိုင်း ဒဏ်ရာကြောင့် သူ့ကစားသမားဘ၀ အမှောင်နေ့ရက်တွေက ဆက်လက်ကြီးစိုးခဲ့တယ်။ သူ ကံမကောင်းတာလည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ ၀ုလ်ဗ်နဲ့ပွဲမှာ ကစားသမားဘ၀ (၁၃)ကြိမ်မြောက် ဒဏ်ရာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး အက်စတွန်ဗီလာအသင်းနဲ့ လမ်းခွဲရမယ့်ရက်ကို ထိုင်စောင့်နေရပါပြီ။ ဒဏ်ရာတွေ မရှိခင်တုန်းကတော့ မီကာရစ်ချတ်က ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ညာနောက်ခံလူစာရင်းဝင် ကစားသမားတစ်ဦးပေါ့။ အင်္ဂလန်အသင်းမှာ အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ်ကတည်းက ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်၊ ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမား၊ နောက် မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ဒုတိယအသင်းခေါင်းဆောင် စတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ မီကာရစ်ချတ်ရဲ့ အနာဂတ်ခရီးလမ်းက ဖြောင့်ဖြူးခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘ၀ဆိုတာက ကိုယ်မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာတတ်တာမှ မဟုတ်တာပဲ။ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလတုန်းက ဆွမ်ဆီးနဲ့ကစားခဲ့တဲပွဲမှာ ဒူးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး အဲဒီဒဏ်ရာက သူ့ ကစားဘ၀ကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ အဲဒီဒဏ်ရာကြောင့် (၆)လအထိ အနားယူခဲ့ရပြီးနောက်မှာတော့ မီကာရစ်ချတ်က အရင် မီကာရစ်ချတ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲဒီနောက်မှာတော့ မန်စီးတီးအသင်းမှာလည်း ပုံမှန်နေရာမရတော့ဘူး၊ ဖီအိုရင်တီးနားအသင်းဆီ အငှားချခံခဲ့ရတော့လည်း ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ မန်စီးတီးအသင်းက သူ့ကို စာချုပ်ဖျက်သိမ်းခဲ့တာကြောင့် အက်စတွန်ဗီလာဆီ လွင့်စင်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒဏ်ရာအိပ်မက်ဆိုးက သူ့ကို ဆက်လက်ခြောက်လှန့်နေခဲ့ပြီး ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီမှာ (၃)ပွဲ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ တစ်ပွဲမှ မကစားနိုင်ခဲ့ဘူး။ အက်စတွန်ဗီလာအသင်းကလည်း မီကာရစ်ချတ်ကို စိတ်ရှည်သည်းခံမှုတွေ ကုန်ဆုံးလာပြီးနဲ့တူပါတယ်၊ အခု သူ့ရဲ့စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းဖို့အထိ ပြင်ဆင်နေပြီ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ တက်သစ်စ နေတစ်စင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ မီကာရစ်ချတ် အသက်(၃၀)အရွယ်မှာ နေ၀င်ရမယ့် အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ မီကာရစ်ချတ်ရဲ့ လက်ကျန်ကစားသမားဘ၀မှာ လူမသိသူမသိအဖြစ်နဲ့ အဆုံး မသတ်ရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရင်း . . . .
အခြိနျမတိုငျခငျ နဝေငျရတော့မယျ့ အင်ျဂလနျတို့ရဲ့ ကွယျပှငျ့ဟောငျး Micah Richards
မီကာရဈခတျြ Micah Richards ဆိုတဲ့ အမညျကို ပရိသတျတှေ မှတျမိသေးရဲ့လား။ တဈခြိနျတုနျးက အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ အနာဂတျ အသငျးခေါငျးဆောငျဖွဈလာမယျ့သူလို့ သတျမှတျခံခဲ့ရသူ၊ မနျစီးတီးအသငျး တဈခတျေဆနျးခြိနျမှာ ပါဝငျခွစှေမျးပွခဲ့သူ။ အဲဒီလို ကစားသမားက အခုအခြိနျမှာတော့ အရှယျမတိုငျခငျ နဝေငျရတော့မယျ့ အခွအေနနေဲ့ ရငျဆိုငျနပွေီ။ အင်ျဂလနျ ဆယျကြျောသကျကစားသမားထဲမှာ ထှနျးတောကျလာမယျ့ ကွယျတဈပှငျ့အဖွဈ သတျမှတျခံခဲ့ရတဲ့ မီကာရဈခတျြအတှကျ အဓိက ထိုးနှကျခဲ့တာက ဒဏျရာပွဿနာတှပေါပဲ။
လိဂျခနျြပီယံရှဈကလပျ အကျစတှနျဗီလာအသငျးမှာ အသကျဆကျနတေဲ့ မီကာရဈခတျြဟာ အခုဆိုရငျ သူ့ Career က အတကျမရှိတော့ဘဲ နောကျထပျ ဆကျကဖြို့သာရှိတော့တယျ။ အခုဆိုရငျ မီကာရဈခတျြဟာ ဘောလုံးကှငျးကို ခွမေခဖြွဈတာက (၆၆၅)ရကျအထိ ရှိနပွေီ။ တိတိကကြပြွောရရငျ ၂၀၁၆၊ အောကျတိုဘာ (၁၅)ရကျတုနျးက ဝုလျဗျနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲနောကျပိုငျး ဒဏျရာကွောငျ့ သူ့ကစားသမားဘ၀ အမှောငျနရေ့ကျတှကေ ဆကျလကျကွီးစိုးခဲ့တယျ။ သူ ကံမကောငျးတာလညျး ပါပါလိမျ့မယျ။ ဝုလျဗျနဲ့ပှဲမှာ ကစားသမားဘ၀ (၁၃)ကွိမျမွောကျ ဒဏျရာနဲ့ရငျဆိုငျခဲ့ရပွီး အကျစတှနျဗီလာအသငျးနဲ့ လမျးခှဲရမယျ့ရကျကို ထိုငျစောငျ့နရေပါပွီ။ ဒဏျရာတှေ မရှိခငျတုနျးကတော့ မီကာရဈခတျြက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ညာနောကျခံလူစာရငျးဝငျ ကစားသမားတဈဦးပေါ့။ အင်ျဂလနျအသငျးမှာ အသကျ(၁၇)နှဈအရှယျကတညျးက ရှေးခယျြခံခဲ့ရတယျ၊ ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံ မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ အဓိက ကစားသမား၊ နောကျ မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ ဒုတိယအသငျးခေါငျးဆောငျ စတဲ့ ဂုဏျပုဒျတှနေဲ့ မီကာရဈခတျြရဲ့ အနာဂတျခရီးလမျးက ဖွောငျ့ဖွူးခဲ့တယျ။
ဒါပမေဲ့ ဘဝဆိုတာက ကိုယျမြှျောလငျ့တဲ့အတိုငျး ဖွဈလာတတျတာမှ မဟုတျတာပဲ။ ၂၀၁၂ အောကျတိုဘာလတုနျးက ဆှမျဆီးနဲ့ကစားခဲ့တဲပှဲမှာ ဒူးဒဏျရာရခဲ့ပွီး အဲဒီဒဏျရာက သူ့ ကစားဘဝကို ဇောကျထိုးမိုးမြှျောဖွဈစခေဲ့တယျ။ အဲဒီဒဏျရာကွောငျ့ (၆)လအထိ အနားယူခဲ့ရပွီးနောကျမှာတော့ မီကာရဈခတျြက အရငျ မီကာရဈခတျြမဟုတျတော့ပါဘူး။ အဲဒီနောကျမှာတော့ မနျစီးတီးအသငျးမှာလညျး ပုံမှနျနရောမရတော့ဘူး၊ ဖီအိုရငျတီးနားအသငျးဆီ အငှားခခြံခဲ့ရတော့လညျး ရုနျးကနျခဲ့ရတယျ။
၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ မနျစီးတီးအသငျးက သူ့ကို စာခြုပျဖကျြသိမျးခဲ့တာကွောငျ့ အကျစတှနျဗီလာဆီ လှငျ့စငျခဲ့ရတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒဏျရာအိပျမကျဆိုးက သူ့ကို ဆကျလကျခွောကျလှနျ့နခေဲ့ပွီး ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီမှာ (၃)ပှဲ၊ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ တဈပှဲမှ မကစားနိုငျခဲ့ဘူး။ အကျစတှနျဗီလာအသငျးကလညျး မီကာရဈခတျြကို စိတျရှညျသညျးခံမှုတှေ ကုနျဆုံးလာပွီးနဲ့တူပါတယျ၊ အခု သူ့ရဲ့စာခြုပျကို ဖကျြသိမျးဖို့အထိ ပွငျဆငျနပွေီ။ ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာ တကျသဈစ နတေဈစငျးဖွဈခဲ့တဲ့ မီကာရဈခတျြ အသကျ(၃၀)အရှယျမှာ နဝေငျရမယျ့ အခွအေနဖွေဈလာခဲ့ပါပွီ။ မီကာရဈခတျြရဲ့ လကျကနျြကစားသမားဘဝမှာ လူမသိသူမသိအဖွဈနဲ့ အဆုံး မသတျရပါစနေဲ့လို့ ဆုတောငျးရငျး . . . .